Shiinaha Warshadda USB -ga ee jilicsan ee PVC iyo soosaarayaasha | SJJ
Wakhtigan casriga ah, qof kastaa wuxuu haystaa ugu yaraan hal ama in ka badan oo USB ah si uu u kaydiyo macluumaadka ama u wareejiyo xogta qaddar kombiyuutarro kala duwan.
Waqtiga Casriga ah, qof walba wuxuu leeyahay ugu yaraan hal ama in ka badan oo USB ah si uu u keydiyo macluumaadka ama u wareejiyo qaddarka xogta kombiyuutarro kala duwan. TheUSB -ga jilicsan ee PVC ilaalin karaa Darawalka USBsi aad u fiican leh daboolkiisa PVC ee jilicsan oo deggan. Uma baahnid inaad ka walwashoDarawalka USBjaba marka uu dhibco dhaco. Daboolka jilicsan ee PVC waxaa lagu samayn karaa qaabab kala duwan oo qurux badan ama isku -dar midabyo kala duwan leh. Calaamadaha 3D ee buuxa waxay naqshadaha ka dhigaan kuwo dhammaystiran oo hodan ah. Tani waxay si buuxda u sharraxaysaa fikradaha naqshadeeyaha iyo nafta qoto dheer. Lifaaqyo kala duwan sida faraantiyada muhiimka ah, xadhkaha, furayaasha, silsiladaha kubbadda marka laga reebo darawalka USB ayaa hawlo badan uPVC darawalka USB USBs. Markaad isticmaalayso jilicsanPVC USB, waxaad ku raaxeysaneysaa waqtiga nolosha cajiibka ah adoo adeegsanaya walxaha gaarka ah.
Tiirka PVC darawalka USB USBwaxay ka socdaan 2 GB illaa 256 GB, waxay daboolaysaa baahiyahaaga kala duwan oo leh dalabyo tiir yar ama weyn. Qiimayaashu waa gorgortan sida waafaqsan shuruudahaaga faahfaahsan.
Qalabka: PVC jilicsan + darawalka USB
Ujeeddooyin: Dhimasho Dhimasho, 2D ama 3D, laba dhinac
Xirxirida: Xirxirida blister, ama raac tilmaamahaaga.
Hore: Billadaha Biraha Acrylic Framed
Darawallada Flash -ka ee USB -ga ah
Darawalka USB ee PVC
PVC darawalka USB USB
USB -kululeeyayaasha kulul